online မင်းသား: August 2012
ကကြိုး အူမယားနဲ. မနီးစပ်ခြင်း ရှက်စရာပဲ လာမချုပ်နဲ. မင်းကြောင့်
အချစ်သီချင်း ခေါက်ပစ်လိုက် အာဖျံကွီး လမ်းခွဲခြင်း
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 20:54 No comments:
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 06:02 No comments:
ချစ်သူ Soul Mate
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 05:51 1 comment:
နင်ပြန်လာမဲ့လမ်း MDY အရောက်ဖြစ်ပုံ ချစ်လေး လုံးဝမရှိနိုင်ဘူး မိုက်တွင်းနက်နေလား ၀င်ခွင့်မရှိ
ကိုယ်စီမာန ဘာလိုလိုနဲ. ညှို.နေတဲ့မိုး အိမ်ပြန်ချိန်ကပွဲ အဖြူရောင်စည်း
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 05:53 No comments:
ဒီဇင်ဘာည ကဗျာဆရာ ခေါ်သံအဝေး လာမနှိုးနဲ. နေညိုရင် နွေအိမ်မက်
ရေဒီယို တစ်ယောက်သောသူ တိမ်တွေလိုဖြစ်ချင်တယ် ၀ိုင်တစ်ခွက်အကြောင်း ရပ်ကြည့်နေဆဲ
ကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲက(လူ) ဂစ်တာမတီးတော့တဲ့ ညတွေ အိမ်မက်ကပွဲ နှလုံးသားချင်းထိတွေ.ခဲ့တယ်
အာလူးစားသူများ ငါမသိလိုက်တဲ့ ကောင်းကင် အသည်းကွဲ ဒီဇင်ဘာ ဟန်နီ အချစ်ဦး
နွေလယ်အိမ်မက်ဆိုး ညမင်းသား အမြဲတမ်း နွေလယ်အိမ်မက်ဆိုး (Instrumental)
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 05:19 1 comment:
ပြန်သိမ်းဆည်းမရသော ရှောင်သွားပါ ရွက်ကြွေ မယုံရဲဘူး အချိန်တွေနှောင်းခဲ့ပြီ
ပျော်တော်ဆက် ပျောက်ရှသွားခဲ့ ပြိုင်ပွဲ မဆိုင်တဲ့သူ သတိရမိလေခြင်း ရက်ပြတ်ရက်ပြတ်
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 04:573comments:
Firefox ရဲ့နောက်ဆုံး Web Browser ဖြစ်တဲ့ Firefox Nightly
Firefox ကနေအသစ်ထွက်လာတဲ့ Firefox Nightly လေးပါ ...မသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ....
Firefox နဲ့ နည်းနည်းကွာတယ် ....နည်းနည်းလည်းမြန်သလိုပါပဲ...သုံးကြည်ရင်တော့သိကြမှာပါ...
ဒေါင်းမဲ့နေရာကိုပုံနဲ့ပြထားပါတယ်...တကယ်လို. သူငယ်ချင်းက linux(intel) ကိုသုံးနေတာဆိုရင်တော့
တတိယနေရာမှာပါ..linux အတွက်ကတော့ 32 bit နဲ. 64 bit နှစ်မျိုးလုံးရှိပါတယ်...ကိုယ့်စက်ကိုကြည့်ပြီး ကြိုက်တာဒေါင်းပေါ့...တကယ်လို. android ဖုန်းသုံးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ကတော့ အောက်ဆုံးမှာပါနော်..အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်....
(သူငယ်ချင်း ထက်ထက်က မေးလ်ပို.ပေးထားတာပါ)
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 23:36 No comments:
ဒီတစ်ခါ online ပေးမဲ့ဆော့လ်ဝဲလေးက သီချင်းတွေကိုစာတန်းထိုးတဲ့ဆော့လ်ဝဲ (Divxland Media Subtitler)
လေးပါ..သူငယ်ချင်း အိမ်မက်ကောင်းကင်က တောင်းဆိုထားလို. ဒီနေ.မှပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..online
လဲအစကတော့ သီချင်းတွေစာတန်းဘယ်လိုထိုးသလဲ ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်..သိလဲသိချင်ခဲ့ပါတယ်..
ဒီနေ.အချိန်နည်းနည်းယူပြီး ရှာတော့မှ divxland ရဲ.လက်စွမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Media Subtitler လေးကိုတွေ.ခဲ့တာပါ..တခြားဆော့လ်ဝဲလေးတွေလည်းရှိပါတယ်..ဒါပေမဲ့လုပ်ရတာအရမ်းလက်ဝင်ပါတယ်..
အရမ်းအချိန်ပေးရပါတယ်..ဒါကြောင့်အခုဆော့လ်ဝဲလေးကိုonlineရွေးပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ...ဒီကောင်လေးက အရမ်းလွယ်ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်က စာတန်းထိုးရုံသက်သက်နဲ...highlight ဖောက်လို.မရဘူးထင်ပါတယ်..online လဲမအားသေးလို.သေချာမစမ်းကြည့်ရသေးပါဘူး..
အဆင်မပြေရင်တော့ ကွန်မန်းပေးခဲ့ကြပါ..online သေချာစမ်းပေးပါမယ်....လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုအကြမ်းလေးပြောပြပေးမယ်နော်..
စလုပ်ဖို့အတွက် Notepad ထဲမှာသီချင်းစာသားတွေကို ဖြတ်တောက်ပြီး တစ်ကြောင်းချင်း ရိုက်ထည့်ရပါမယ်... ပြီးရင်တစ်နေရာမှာ သိမ်းလိုက်ပါ... နောက် Divxland Media Subtitler ကို ဖွင့်ပြီး
မိမိစာသားထည့်မယ့် Video ဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ..
ပြီးရင် သီချင်းကို Play လုပ်ပြီး အဲဒီ Program မှာပါတဲ့ Apply ခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်.. လွှတ်လိုက် လုပ်ပြီး အသံနဲ့ စာနဲ့ ကိုက်အောင် လုပ်ရပါမယ်..ပြီးသွားရင်
ဖိုင်ကို သိမ်းရပါမယ်...ဒါဆိုသူက Subtitle ဖိုင်လေး တစ်ဖိုင်ကို
ထုတ်ပေးပါလိ့မ်မယ်..ဒီနေရာမှာ သတိပြုရမှာက သိမ်းတဲ့အခါမှာ ဖိုင် Format ကို
SubStation Alpha ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ...
ပြီးရင်တော့ File ကနေ Embed Subtitle ကို ရွေးရုံပါပဲ...အဲဒီအခါမှာ VirtualDub Program ရှိတဲ့ နေရာကို ရွေးရတာတို့...Xvid Encoder ကို သုံးရတာတို့ စတာတွေကို လုပ်ပေးရပါတယ်။
ဒါဆိုရင် စာတန်းထိုးပြီးသား VCD သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးလို့ ရသွားပါပြီ...အဆင်ပြေမယ်လို.မျှော်လင့်
Divxland Media Subtitler(2.0) ကို ဒီနေရာလေး မှာဒေါင်းလိုက်ပါ...
တခြားပစ္စည်းလေးတွေ လေ့လာချင်သေးရင် ဒီနေရာလေး မှာကြည့်လိုက်ပါ...
နောက်တစ်မျိုးနော်...တကယ်လို. အချိန်ရတယ် ..အလုပ်ရှူတ်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ online ထပ်ပြီးတော့
ဆော့လ်ဝဲလေးတွေပေးလိုက်ပါမယ်..မအားသေးတော့ online လဲဘာကိုမှ မစမ်းသပ်နိုင်သေးပါဘူး...
အောက်ဆုံးက နှစ်ခုကတော့ လူသုံးများပါတယ်....
VCD ကာရာအိုကေ kit
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 21:552comments:
မေသက်ရဲ. puzzle ပုံလေးကိုပြန်ဆက်မယ်
online ကိုကူညီပါနော်.. သူငယ်ချင်းတို.ရေ..online သိပ်ခိုက်တဲ့ မေသက်ပုံလေးကို puzzle ပုံလေးလုပ်ထားတယ်..ပုံမှာပြထားတဲ့ ok ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..ပြီးရင်တော့ ပုံလေးကိုအကောင်းအတိုင်းပြန်ဆက်ပေးနော်..ကျေးကျေးပါ...ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 01:16 No comments:
photo cube generator နဲ.ဓာတ်ပုံကိုလည်အောင် လုပ်ကြမယ်
online မင်းသား သိပ်ခိုက်တဲ့ ရွှေမင်းသမီးလေးပါ ဒီတစ်ခါတော့ online မင်းသားက satisfaction ရဲ.အစွမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ photo cube genertor လေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးလိုက်မယ်နော်..ဒါလေးက ကြာပါပြီ..မတင်ရသေးလို.အခုမှတင်ပေးလိုက်တာပါ..သိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလဲ ရှိကြမှာပါ..ရွှေမြို.တော်ဆိုဒ်ထဲမှာလဲ online လုပ်ထားပါတယ်..မိုက်ပါတယ်..သူငယ်ချင်းတို.ရဲ.ဓာတ်ပုံလေးကို ဖန်တုံးလေးထဲ မှာ ထည့်ပြီး လည်နေတဲ့ပုံပါ..ပထမဆုံး အောက်နားမှာ online ပေးထားတဲ့ သူ.လင့်ခ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ..သူ.ဆိုဒ်ကိုရောက်သွားရင် လည်နေတဲ့ဖန်တုံးအောက်နားက BROWSE ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံလေးကိုခေါ်ပါ..ပြီးရင် အောက်နားက UPLOAD ကိုနှိပ်ပြီးစောင့်ပါ..ရပြီဆိုရင် အပေါ်နားက ဖန်တုံးလေးမှာ သူငယ်ချင်းလုပ်ထားတဲ့ပုံလေး လည်နေမှာပါ..လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်နားက copy HTML code ကိုနှိပ်ပြီးကူးယူလိုက်ပါ..ပြီးရင် ဆိုဒ်လေးတွေထဲမှာ တင်ပေါ့..ဟုတ်ဘူးလား..အပေါ်မှာ မေသက်ရဲ.ပုံလေးနဲ. online လုပ်ပြထားပါတယ်..
လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေးကနေ သွားလိုက်နော်..အဆင်ပြေမယ်လို.မျှော်လင့်ပါတယ်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 00:43 No comments:
laptop ကနေ wifi ပြန်လွှင့်ချင်ရင်
online အခုပေးမှာက Laptop ကနေWifi ပြန်လွင့်ချင်သူများအတွက် Connectify Pro လေးပါ...ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုပြီး share ပေမဲ.လည်း မိမိ ပေးထားတဲ့hotspot password ကိုမသိရင်သုံးလို့ မရပါဘူး... မိမိပေးသုံးချင်တဲ့ သူများကို password ပေးပြီးသုံးခိုင်းမှသာသုံးလို.ရမှာပါ... နောက်မိမိ share လိုက်တဲ့ wifi connection ကို မိမိမသိဘဲဝင်ရောက်အသုံးပြုနေသူများ ရှိမရှိကိုလည်း Clients မှာသွားကြည့်လို.ရပါတယ်... Connectify Pro Version 3.6 နဲ့3.5.1 ဆိုပြီး နှစ်ခုပေးထားပါတယ်..keygen ကိုပါတခါတည်း ပေးထားပါတယ်...မိမိအသုံးပြုချင်တဲ့version ကို အောက်မှာသွားဒေါင်းသွားလိုက်နော်...အဆင်ပြေမယ်လို.မျှော်လင့်ပါတယ်..
Connectify Pro 3.6 နှင့် Keygen
Connectify Pro 3.5.1 နှင့် Keygen
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 22:36 No comments:
ANDROID ဖုန်းတွေကို မြန်မာဖောင့် လွယ်လွယ်သွင်းနိုင်မဲ့ ဆော့လ်ဝဲ
သူငယ်ချင်းတွေမေးထားကြလို. ဒီဆော့လ်ဝဲလေးကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ..နောက်ကိုလဲဖုန်းနဲ.ပါတ်သတ်တဲ့ ဆော့လ်ဝဲလေးတွေတင်ဖို.ရှိပါတယ်...ဒါကတော့ SONY ဖုန်းနဲ့ ANDROID ဖုန်း တွေကို မြန်မာဖောင့် လွယ်လွယ်သွင်းနိုင်မဲ့ ဆော့လ်ဝဲလေးပါ.. Myanmar Mobile Application ရဲ့ Product ဖြစ်တဲ့ Font Changer လေးပါ..သိပြီးတဲ့သူလဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်..တော်တော်လည်းလွယ်ပါတယ်...
အရင်ဆုံး ဒီနေရာလေးမှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါ..ပြီးရင် သူ.ကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့.. Superuser Request မေးလာရင် Allow လုပ်ပေးလိုက်ပါ...ဒါဆိုရင် Auto-Reboot လုပ်နေပါလိမ့်မယ်... ပြန်တက်လာရင်တော့ မြန်မာလိုမြင်ပါပြီ..သူငယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို မျှော်လင့်မိပါတယ်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 19:59 1 comment:
အရမ်းကောင်းတဲ့ software တခုအကြောင်းပြောပြမယ်နော် မိမိကွန်ပျုတာမှာရှိတဲ့ folder တွေကို
အရောင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းမယ် မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင် ဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နော် ပြောင်းဖို့အဆင့်ဆင့်ကိုထက်ထက်ပြောပြမယ်နော် သူငယ်ချင်းတို့
အရင်ဆုံး Download ဖိုင်လေးကိုဒေါင်းပြီးတာနဲ့ဖွင့်လိုက်ရင် အောက်ကပုံလေးအတိုင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်
Folder ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာ ပြောပြမယ်နော်
(1) အပေါ်ဆုံး မှာ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ folder ကိုထည့်မယ်
(2) ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံကိုပြောင်းမယ် ပြီးရင်ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကို ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ (3) ပြီးရင်အောက်က အကွက်လေးနှစ်ခုကိုအမှန်ခြစ်လိုက်ပါ
(4) နောက်ဆုံးမှာ Apple လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် folder လေးပုံစံပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်
ဒီလို folder ကိုဒီဇိုင်းပြောင်းဖို့အတွက် Download လုပ်ရအောင် ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်..
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 01:12 1 comment:
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ပုံလေးကို ပုံအဟောင်းဖြစ်အောင် လုပ်ကြည့်မယ်နော်... စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်စမ်းသပ်ကြည့်နော် ..လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ပုံနဲ့ပြထားပါတယ်.. ကဲ အရင်ဆုံး ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီး သွားလိုက်နော်... ပုံလေးကိုအစားသွင်းပြီးပြီဆိုရင် မသိမ်းခင်ပုံကိုပြင်လို့ရပါတယ်နော်...
Color ဘေးက ထောင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် ပုံရဲ့နောက်ခံအရောင်ကို ပြောင်းလို့ရပါတယ်.. How Old ဘေးက ထောင့်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် ပုံလေးက ဟောင်းသထက်ဟောင်းအောင်ပြင်လို့ရပါတယ်.. သိမ်းတော့မယ်ဆိုရင် Save Photo လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် အောက်မှာတွေ့ရမဲ့ ဘောင်လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်.. Save Photo ကိုနှိပ်လိုက်ပါ...
ဒီလိုဖြစ်အောင် စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် စမ်းသပ်ကြည့်နော်.. မူရင်းလင့်သိချင်ရင် ဒီနေရာမှာပါ မူရင်းလင့်ထဲမှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ပုံစံလေးတွေရှိပါတယ် စမ်းသပ်ကြည့်ပါနော်... (ထက်ထက်ရဲ.ပို.စ်လေးပါ)
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 00:06 No comments:
ပုံလှလှလေးတွေပေါ်မှာ Message ရေးရအောင်
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူဆီကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဇိုင်းမျိုးစုံရှိတဲ့ ပုံလှလှလေးနဲ့ Message ပို့ကြမယ်နော်.. ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့အတွက်အများကြီးရှိပါတယ်.. ဒီဇိုင်းတမျိုးလေးပေါ့.. စာရေးတဲ့အခါကျရင် English လိုပဲရပါတယ်နော်.. ကုဒ်ကို copy လုပ်တဲ့အခါ Select လုပ်ပြီိးမှ copy လုပ်ပါ.. ပြီးရင် ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ အိမ်လေးရဲ့HTML မှာ Paste လိုက်ပါ.. ဒီနေရာလေးကနေ သွားလိုက်နော်.. လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုအောက်မှာပုံနဲ့ပြထားပါတယ်...
အဆင်ပြေမယ်လို. မျှော်လင့်ပါတယ်... သူငယ်ချင်းထက်ထက်က ပို.ပေးထားပါ..
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 23:25 No comments:
ဓာတ်ပုံကို calendar လေးတွေနဲ.ဒီဇိုင်းဖော်မယ်
ကိုယ့် ဓာတ်ပုံ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ "Calendar" လေးတွေ ဒီဇိုင်းဖော်ကြည့်ရအောင်နော်.. ပြုလုပ်ပုံကတော့ အဆင့်(၆)ဆင့် ရှိတယ်.. အောက်မှာ ပုံလေးနဲ့နည်းနည်း အသေးစိတ်ပြောပြပါ့မယ်.စိတ်ဝင်စားတဲ့သူငယ်ချင်းတို့ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်..
အရင်ဆုံး ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါ။ ရောက်ရင်တော့အပေါ် မှာပေးထားတဲ့ ပုံလေးအတိုင်းပုံလုပ်ပုံအဆင့်(၆)ဆင့်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်
အဆင့်(၁) ။ ။ "Selectaformat for your free yearly calendar" ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရွေးပါ။ သူကရွေးဖို့(၄)မျိုးပေးထားပါတယ်။ ထက်ထက် ပုံရဲ့နံပါတ်(၁)မှာ အနီရောင်နဲ့ ရွေးဖို့ပြထားပါတယ်။ အဆင့်(၂) ။ ။ "Selectayear for your free yearly calendar" နေရာမှာ မိမိပြုလုပ်မယ့် Calendar ရဲ့နှစ်ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။ ထက်ထက်ကတော့ အခုနှစ် 2012 ကိုပဲရွေးထားပါတယ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နှစ်ကိုရွေးပါ။ အဆင့်(၃)။ ။ "SelectaPhoto for your free yearly calendar" နေရာမှာ "Browser" ကိုနှိပ်ပြီး မိမိထည့်ချင်တဲ့ ချစ်သူ သူငယ်ချင်း ရူခင်းပုံ ကို ထည့်လို့ရပါတယ် ။
အဆင့်(၄)။ ။ " Enteracaption for your free yearly calendar" ဆိုပြီးပေးထားတဲ့နေရာ လေးမှာ ကိုယ့်ပြုလုပ်မဲ့ Calendar လေးမှာကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့စာသားလေးတချို့ကိုထည့်ဖို့ပါ။ (English) လိုပဲရမယ်နော်။
အဆင့်(၅)။ ။ "Selectafont for your free yearly calendar" နေရာမှာ စောစော က မိမိရေးလိုက်တဲ့စာသားလေးကို "font" အမျိုးအစားရွေးပေးဖို့ပါ။
အဆင့်(၆)။ ။"Generate your free yearly calendar"ဆိုတဲ့ "Icon" လေး ကို "Click" ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်လိုက်ရင် ကိုယ်ကိုတိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ "Calendar" လေးရပါပြီနော်။ ထက်ထက် နမူနာအနေနဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံလုပ်ပြထားပါတယ်။ နမူနာပုံပေါ့။
ဒီလိုမသိမ်းချင်ဘူးဆိုရင် အရင်ဆုံး ပုံနဲ့ပြက္ခဒိန်တွဲရက်ကို Ctrl+ Prl Scr Sys Rq ကိုနှိပ်ပါ ပြီးရင် All Programs ထဲက paint ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးရင် Ctrl+ V ကိုနှိပ်ပါ စောစောကလုပ်ထားတဲ့ ပြက္ခဒိန်လေးထွက်လာပြီဆိုရင် Crop ကိုနှိပ်ပြီး ပြက္ခဒိန်နဲ့ ကွက်တိ ဖြတ်လိုက်ပါ နောက်ဆုံးသိမ်းတော့မယ်ဆိုရင် paint ထဲက Save as နဲ့သိမ်းလို့ရပါပြီ သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနာ် မူရင်းလင့်လေးက ဒီနေရာမှာနော် (သူငယ်ချင်းထက်ထက်ရဲ. ပို.စ်လေးပါနော်)
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 22:37 No comments:
ဒီတစ်ခါ online ပြောပြပေးမဲ့ ဆိုဒ်ကလေးက အရမ်းလန်းပါတယ်..online လဲလျှောက်ကလိရင်းနဲ. တွေ.လာတာ..ဟိ.. သယ်ရင်းတို.ရဲ. ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ. ဘောင်လေးတွေနဲ. အရောင်လေးတွေနဲ. စတိုင်အမျိုးမျိုးပေါ့.. ကြိုက်သလိုလုပ်ပြီး slide show လုပ်တဲ့ဆိုဒ်ကလေးပါ..ဒါပေမဲ့ သူ.ဆီမှာ singup လုပ်ဖို.တော့လိုပါတယ်..ကြိုက်သလို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပြီးရင် သူပေးတဲ့ကုဒ်ကိုယူပြီး ဆိုဒ်ကလေးတွေမှာလဲ တင်လို.ရသလို လက်ဆောင်ပေးလို.လဲရတာပေါ့....CD နဲ.တော့ မပေးဘူးထင်ပါတယ်...online လဲအကုန်လုပ်မကြည့်ရသေးဘူး...တော်တော်ကောင်းပါတယ်...လေ့လာစရာတွေလဲ များပါတယ်..ကိုယ်ကလိရင် ကလိသလို တတ်လွယ်ပါတယ်..အဆင်ပြေမယ်လို. online မျှော်လင့်တယ်နော်... လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာလေးကနေ သွားလိုက်နော်
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 00:18 No comments:
Gtalk မှာမိမိကို block ထားသူကို ဆော့လ်ဝဲသုံးပြီးရှာမယ်
gtalk မှာ မိမိကို block လုပ်ထားတဲ့ သူကိုရှာတဲ့နည်းလေးပါ..အရင်က voice call လေးနဲ့ စမ်းသပ်လို့ရပါတယ်...အခုတော့ သိပ်မရတော့ဘူး .. ဒါကြောင့် မသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ဒီပို.စ်လေးကိုရေးလိုက်တာပါ.. ပထမဆုံး online အောက်နားမှာပေးထားတဲ့ link လေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ..အဲဒါကို ဒေါင်းပြီးရင် Add account မှာ လိုအပ်တာလေးတွေ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ.. နောက် Basic ကိုသွားပြီး အဲဒီအောက်မှာ Protocol ဆိုတာကိုတွေ.ပါလိမ့်မယ်... ဘေးနားက အစက်လေးကို ကလစ်ပေးပါ..ပြီးရင် Google Talk ဆိုတာလေးကိုရွေး လိုက်ပါ.. Username မှာ မိမိရဲ့ gtalk နာမည်ဖြည့်ပါ..Resource ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘာမှဖြည့်စရာမလိုပါဘူး... password ဖြည့်ပါ... local ailias မှာ ကြိုက်တာတစ်ခုခုထည့်... ပြီးရင် add ကိုနှိပ်ပါ...အားလုံးဖြည့်ပြီးရင် နာမည် list တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.. မိမိ သိချင်တဲ့သူရဲ့အကောင့်ကို right click ထောက်ပါ..ပြီးရင် Get info ကိုသွားလိုက်ပါ...မိမိကို block ထားသူဆိုရင် ဘာမှမပေါ်ပါဘူး..block မထားတဲ့သူဆိုရင်တော့ သူတင်ထားတဲ့ပုံလေးရယ် Full Name ဆိုတဲ့ နာမည်လေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်..သူငယ်ချင်းအားလုံး အဆင်ပြေမယ်လို. online မျှော်လင့်ပါတယ်...
လိုချင်ရင်တော့ ဒီနေရာလေး မှာဒေါင်းလိုက်ပါ....
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 22:40 No comments:
ဒါကတော့ html အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်းစားတဲ့ သူတွေအတွက် မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ.. ကိုအောင်နိုင်က လိုချင်တယ်ဆိုလို. online တင်ပေးလိုက်တာပါ...နောက်ပိုင်းမှာလဲ html ကုဒ်လေးတွေကို တင်ပေးမှာပါ..online မအားသေးလို.ပါ..သူငယ်ချင်းအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို.မျှော်လင့်မိပါတယ်... ဒီနေရာလေး မှာဒေါင်းလိုက်နော်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 05:22 No comments:
ပုံတွေမှာ animation နဲ.စာရေးနည်း
ပုံတွေမှာ Animation Text ထည့်နည်းလေးပါ..မေးလ်ထဲမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးထားတာမို.
ဒီပို.စ်လေးနဲ.ပဲ သူငယ်ချင်းအားလုံးသိစေရန်ဖော်ပြလိုက်တာပါ..online လဲအလုပ်များနေတော့ ကိုယ်တိုင်
ဓာတ်ပုံရိုက်ချိန်မရလို. မလွမ်းရဲ.ဆိုဒ်ထဲကပဲ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..အောက်မှာပုံနှင့်တကွ လုပ်နည်း
၁။ Adobe PhotoShop CS5 ကို ဖွင့်ပြီး Animation Text ထည့်မဲ့ပုံကို Open ပြုလုပ်ပါတယ်…
၂။ မိမိရေးလိုသောစာသားကို Font, Size, Color ရွေးချယ်ပြီး Text Tool နဲ့ရေးသားပါမယ်…
၃။ Text ကို Effect ထည့်မယ်ဆိုရင် fx ကို Click ပြုလုပ်ပါ… Bevel and Emboss ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပါမယ်…
၄။ Bevel and Emboss Dialog Box မှ Structure ရဲ့ Depth နဲ့Shading Color တို့ ကို ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်…
၅။ အဆင့်(၃)လိုပဲ Text Effect အတွက် Drop Shadow ကို ရွေးပါမယ်…
စာလုံးအရိပ်ကို မြင်စေလိုတဲ့အတွက် Distance 15px ထားပြီး Opacity ကို 85% ထားပါတယ်…
၆။ နောက် Text Effect တစ်မျိုးက Stroke ပါ… စာလုံးအပြင်မှာ လိုက်ထပ်ရန် အရောင်ကို ပန်းရောင်ရွေးထားပါတယ်…
ဒီပုံလေးကတော့ Text Effect ၃-မျိုးယူပြီး ရေးထားတဲ့ စာလုံးပုံစံပါ...
၇။ စာလုံးပုံစံကို ပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Animation ပြုလုပ်ရန် စတင်ပြင်ဆင်ပါမယ်… Window Menu အောက်က Animation ဆိုတာကို ရွေးထားရင် ပုံရဲ့အောက်ဖက်မှာ Animation (Frames) Dialog Box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်…
ပေါ်လာရင် Duplicates Selected Frames ဆိုတဲ့ Button ကို Click ပြုလုပ်ပါက ပုံတွင်မြင်ရတဲ့အတိုင်း Frame တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာမှာပါ…
၈။ စာတန်းလေးကို နေရာရွှေ့ ပါမယ်… အတည့်အတိုင်း ရွှေ့ မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Ctrl Key ကို ဖိထားပြီး Left Arrow ကို အသုံးပြုရွှေ့ ပါ… Move Tool သုံးပြီး Mouse ကို ဖိရွှေ့ ပါက အထက်အောက်ရွေ့ သွားတတ်လို့ ပါ…
၉။ ပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း စာလုံးကို ရွှေ့ ထားပြီး Tweens animation frames ဆိုတဲ့ Button ကို Click ပြုလုပ်ပါမယ်…
၁၀။ Tween Dialog Box ပေါ်လာတဲ့အခါ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Frames ၅-ခု ထပ်ယူပါမယ်…
၁၁။ အဆင့်(၇) မှ အဆင့်(၁၀) အတိုင်း Duplicates Selected Frames လုပ်မယ်၊ စာတန်းလေးကို ဘယ်ဖက်ကို အနည်းငယ်ရွှေ့ မယ်၊ Tween animation frames လုပ်မယ်၊ ဆိုတာတွေကို စာတန်းဘယ်ဖက်မှာ ပျောက်သွားအောင်ထိ လုပ်သွားပါမယ်…
၁၂။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Frames ၇၅-ခု လုပ်ထားတာကို တွေ့ ရမှာပါ… ဒါဆိုရင် Animation Text လုပ်ပြီး ဖြစ်နေမှာပါ…
၁၃။ File ကို သိမ်းတဲ့အခါ Movie အနေနဲ့သိမ်းလို့ ရသလို Gif File အနေနဲ့ လည်း သိမ်းလို့ရပါတယ်… Movie File အနေနဲ့သိမ်းမယ်ဆိုရင် File>>>Export>>>Render Video ဆိုတာကို ပြုလုပ်ရပါမယ်…
၁၄။ Gif File အနေနဲ့သိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ File>>>Save for Web & Devices ကို ရွေးချယ်ရပါမယ်…
Preview ကြည့်ပြီး ကြိုက်ပြီဆိုရင် Save လုပ်ရုံပါပဲ....
၁၅။ File Name ပေးတဲ့အခါ .gif လို့Extension ထည့်ပေးပါနော်...
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 04:10 No comments:
သရဲဆိုတာကို မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဖူးမယ် တကယ်လို့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆိုဒ်လေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးအတိုင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ပီးရင်ခဏစောင့်နော် အရမ်းချောတဲ့ ကောင်မလေး ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော် သရဲထဲမှာ သူအချောဆုံးပဲ
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 04:16 1 comment:
အခုပို့စ်လေးကတော့နည်းနည်းထူးတယ်နော် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းက ထက်ထက်တင်ဖူးပါတယ်
ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူကို စာလေးရေးပေးရုံပဲနော် ဒီတခါတော့ စာရေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ဓါတ်ပုံလေးပါထည့်
လို့ရတဲ့ပုံစံလေးပါ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် စမ်းသပ်ကြည့်နော် ချစ်သူမရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း
ဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင် လုပ်ကြည့်ရအောင်နော် အရင်ဆုံး http://www.effectfun.com/effects/Pencil_Sketch_Effect.php လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်နော်
(၃) ပြီးရင် URL မှာ http://www.effectfun.com လေးကိုထည့်လိုက်ပါ
၄) Browse ဘေးက Upload လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် အောက်မှာထည့်ရမဲ့ပုံရဲ့အရွယ်အစားကိုချိန်ရပါ့မယ်
ချိန်ပြီးပြီဆိုရင် ပုံရဲ့အောက်ဆုံးမှာ Crop Image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ
(၅) နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ ပုံလေးကိုသိမ်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့
စာရေးမယ်ဆိုရင် Save ထားတဲ့ပုံလေးရလာပြီဆိုရင် ALL Programs ထဲက Paint ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
ပြီးရင် သိမ်းထားတဲ့ပုံကိုဖွင့်လိုက်ပါ paint ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ မြန်မာလိုရေးလို့ရပါပြီနော်
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 04:11 1 comment:
Firefox ရဲ့နောက်ဆုံး Web Browser ဖြစ်တဲ့ Firefox N...
photo cube generator နဲ.ဓာတ်ပုံကိုလည်အောင် လုပ်ကြမ...
ANDROID ဖုန်းတွေကို မြန်မာဖောင့် လွယ်လွယ်သွင်းနိုင...
Gtalk မှာမိမိကို block ထားသူကို ဆော့လ်ဝဲသုံးပြီးရှ...